Umatshini Wepastem Eyenziwe Ekhaya
Umatshini Wepastem Eyenziwe Ekhaya U-Hidro Mama Mia kukuhlangula ngokwenkcubeko ngokusebenzisa i-gastronomy yase-Italiya. Kulula ukuyisebenzisa, kulula kwaye icompact, kulula ukuyigcina kwaye uyithutha. Ivumela ukuvelisa okuphezulu okukhuselekileyo, ukubonelela ngamava okupheka aphefumlayo kusapho kubomi bemihla ngemihla kunye nokusebenzisana kwabahlobo. I-injini idityaniswe ngokupheleleyo kuthumelo olusasazekayo, inika amandla, amandla kunye nokusetyenziswa okukhuselekileyo, ukubonelela nokucoca ngokulula kunye nenkxaso. Inqumle inhlama kunye nobunzima obahlukeneyo, ukukwazi ukulungiselela iintlobo ezahlukeneyo zezitya: ipasta, ii-noodle, i-lasagna, isonka, i-pastry, ipitsa kunye nokunye.
I-Hypercar Ngamaxesha obuchwephesha obuphakamileyo bazo zonke izixhobo zedijithali, ukugcwala kwesikrini sokuchukumisa kunye nezithuthi ezinomthamo owodwa, iprojekthi yeBrescia Hommage sisikolo esidala esinethala leencwadi elinamandla okufundela abonwa njengombhiyozo wexesha apho ukucacisa ngokulula, ukubambeka kwezinto phezulu, amandla eluhlaza, ubuhle obucocekileyo kunye nokunxibelelana ngokuthe ngqo phakathi kwendoda kunye nomatshini kwakuyimithetho yomdlalo. Ixesha apho amadoda anesibindi kunye nobukrelekrele njengo-Ettore Bugatti ngokwakhe wenza izixhobo zefowuni ezamangalisa umhlaba.
Iiphuli Zokuqubha Isiphelo seNtsapho yeNtlalontle yeyona nto iluluhlu lweeprojekthi ezakhiwa ngu-Enota e-Terme Olimia kule minyaka ilishumi elinesihlanu idlulileyo kwaye iqukumbela inguqu epheleleyo yobunzima be-spa. Ukujonga kumgama, imilo, umbala kunye nobukhulu bokuma okutsha okuhlanganisiweyo kweevolukopu yitoliki kukuqhubekeka kwecandelo lezakhiwo ezikufuphi nezasemaphandleni, ngumbono oya kuthi qatha entliziyweni yentsimbi. Uphahla olutsha lusebenza njengesihla esikhulu sasehlotyeni kwaye alunaso nayiphi na indawo yangaphandle exabisekileyo.
Umatshini Ozenzekelayo We-Juicer
Umatshini Ozenzekelayo We-Juicer I-Toromac yenzelwe ngokukodwa ngenkangeleko yayo enamandla ukuzisa indlela entsha yokutya okutsha okucinywe ijusi yeorenji. Yenzelwe ukuthathwa kwejusi ephezulu, ilungiselelwe iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela kunye nevenkile enkulu kunye noyilo lwayo lwepremiyiy ivumela amava anobubele okuhambisa incasa, impilo kunye nococeko. Inenkqubo yokuvelisa enquma iziqhamo ngokuthe nkqo kwaye inyibilikisa ii-halves ngoxinzelelo olujikelezayo. Oku kuthetha ukuba ukusebenza ngokuphezulu kufezekiswa ngaphandle kokuncwina okanye ukuchukumisa iqokobhe.
Ileyibhile Yobhiya Uyilo lweeleyibhile yobugcisa kwisitayile seArt Nouveau. Ileyibheli yebhiya ikwanayo neenkcukacha ezininzi malunga nenkqubo yokwenza. Uyilo lukwanela nakwiibhotile ezimbini ezahlukeneyo. Oku kunokwenziwa ngokuprinta uyilo ngo-100 pesenti yokubonisa kunye neepesenti ezingama-70. Ileyibhile iqhagamshelwe kwindawo yokugcina idatha, eqinisekisa ukuba ibhotile nganye ifumana inani elikhethekileyo lokuzalisa.
Uphawu Lophawu Esi siCwangciso soShicilelo lomntu kunye neProjekthi yesazisi. I-BlackDrop ngumtya wevenkile kunye nethengiso kunye nentengiso yekofu. I-BlackDrop yiprojekthi yobuqu eyaphuhliswa kuqala ukuseta ithoni kunye nesikhokelo sokuyila ishishini lokuyila ngokwakho. Obu buchwephesha beNtengiso benzelwe injongo yokubeka ii-Aleks njengomcebisi wentengiso othembekileyo kuluntu lokuqalisa. I-BlackDrop imele uphawu oluluqilima, lwento yangoku, ebonakalayo ejolise ekubeni luphawu olungaphelelwa lixesha, elibonakalayo, nelikhokelela kushishino.
Phenotype 002 Isongo Monday 23 May
Mangata Patisserie Isazisi Esibonakalayo Esibhakiweyo Sunday 22 May
The Curtain Iofisi Yokuthengisa Saturday 21 May
Umatshini Wepastem Eyenziwe Ekhaya I-Hypercar Iiphuli Zokuqubha Umatshini Ozenzekelayo We-Juicer Ileyibhile Yobhiya Uphawu Lophawu